Córdoba ၏ ပုံမှန်အစားအစာ- salmorejo မှ ခရုများ | ခရီးသွားသတင်း
လူးဝစ် Martinez | 05/05/2022 14:00 | Cordoba, gastronomy
La Cordoba ၏ပုံမှန်အစားအစာ လွှမ်းမိုးမှုနှစ်ခု၏ ရလဒ်ဖြစ်သည်။ တစ်ဖက်တွင်၊ Andalusian သည် ၎င်း၏ မွတ်စလင်အတိတ်မှ ဆင်းသက်လာပြီး တစ်ဖက်တွင် ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်များသည် Iberian ကျွန်းဆွယ်၏ မြောက်ဘက်မှ ရောက်ရှိလာခြင်းဖြစ်သည်။ ပထမဦးစွာ သူသည် ပေါများသောအသုံးကို အကြွေးတင်သည်။ နံ့သာမျိုး အော်ရီဂနို၊ mint သို့မဟုတ် tarragon ကဲ့သို့သော ရိုးရာချက်ပြုတ်နည်းများစွာကို နောက်ပိုင်းမှ ယူဆောင်လာခဲ့သည်။
အ မြေကြီး၏ထုတ်ကုန်များ ၎င်း၏အဓိကပါဝင်ပစ္စည်းများဖြစ်ကြသည်။ ၎င်းတို့တွင် တန်းတူရည်တူ မရှိမဖြစ် အခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်နေပါသည်။ သံလွင်ဆီ သူတို့လယ်တွေ။ ဒါပေမယ့်လည်း သူ့ရဲ့တောင်တန်းတွေရဲ့ နွားတွေ၊ အတိအကျအားဖြင့်၊ Cordovan gastronomy တွင် မျိုးကွဲနှစ်မျိုးကို ကျွန်ုပ်တို့ ခွဲခြားနိုင်သည်။ ခေါ်သံ ယဉ်ကျေးသော ဤစိုက်ပျိုးရေးစင်တာများတွင် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာခြင်းကြောင့် အခြေခံအားဖြင့် ဟင်းချိုနှင့် စွပ်ပြုတ်များဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည်။ ထိုအစား၊ ကျေးလက်မှ အရသာရှိသော ဟင်းလျာများပေါ်တွင် ပိုမိုအခြေခံထားသည်။ Córdoba ၏ ပုံမှန်အစားအစာများကို ပိုမိုကောင်းမွန်စွာ သိရှိလိုပါက၊ ၎င်း၏ လူကြိုက်အများဆုံး ချက်ပြုတ်နည်းများကို လေ့လာကြည့်ရှုပါမည်။
1 Córdoba ၏ပုံမှန်အစားအစာတွင်ဂန္ထဝင်အအေးဟင်းချို
2 စွပ်ပြုတ်များနှင့် စတင်သည်။
4 Córdoba ၏ ပုံမှန်အစားအစာများတွင် တွေ့ရသည့် အခြားဟင်းလျာများ
5 Cordovan gastronomy ၏ ဂန္တဝင် ခရုများ
6 ကုန်းတွင်းပိုင်းပြည်နယ်မှ ငါးများ
7 Cordoba မှမုန့်များ
8 Córdoba ၏ပုံမှန်အစားအစာနှင့်တွဲရန်အချိုရည်
ရာသီဥတုက နေရာတစ်ခုရဲ့ အစားအသောက်ကို အမြဲလွှမ်းမိုးပါတယ်။ ကော်ဒိုဘာသည် ခြွင်းချက်မဟုတ်ပေ။ ပူပြင်းသော ရာသီဥတုသည် ခန္ဓာကိုယ်ကို လန်းဆန်းစေသော ဟင်းချို သို့မဟုတ် အအေးလိမ်းဆေးများ ပြင်ဆင်မှုကို ဖိတ်ခေါ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ဤဟင်းချက်နည်းအမျိုးအစားများသည် Cordovan ဟင်းလျာတွင် ရိုးရာဖြစ်သည်။
ဤသဘောဖြင့် သူ၏ မဟာဂန္ထဝင်လည်း ဖြစ်နိုင်သည်။ သကြားလုံး. ၎င်း၏ အခြေခံပါဝင်ပစ္စည်းများမှာ ပေါင်မုန့်၊ သံလွင်ဆီ၊ ကြက်သွန်ဖြူ၊ ဆားနှင့် ခရမ်းချဉ်သီးတို့ဖြစ်သည်။ ရလဒ်ကတော့ ဝက်ပေါင်ခြောက် ဒါမှမဟုတ် ကြက်ဥပြုတ်နဲ့ အရသာရှိတဲ့ ခရင်မ်တစ်မျိုးပါ။ ထို့အပြင်၎င်း၏ဖွဲ့စည်းမှုနှင့်သောက်သုံးပုံကြောင့်၊ ပညာရှင်များသည် Andalusian gazpachos တို့တွင်ဤစာရွက်ကိုထည့်သွင်းထားသည်။
သို့သော်၎င်းသည် Córdoba ၏တစ်ခုတည်းသောအအေးဟင်းချိုမဟုတ်ပါ။ ထိုနည်းလည်းကောင်းပင် ကြက်သွန်ဖြူဖြူရေ၊ ကြက်သွန်ဖြူ၊ ဆား၊ သံလွင်ဆီ၊ ပေါင်မုန့်၊ ဗာဒံစေ့နဲ့ ရှာလကာရည်တို့နဲ့ ပြုလုပ်ထားပါတယ်။ အလားတူပင်၊ ဖရဲသီး သို့မဟုတ် စပျစ်သီးအပိုင်းများဖြင့် တွဲဖက်၍ ကျွေးမွေးမည်ဖြစ်သည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်၊ ၎င်းသည် ရောမခေတ်နှင့် ဂရိဟင်းလျာများအထိပင် ဖြစ်နိုင်သောကြောင့် ၎င်း၏မူလအစမှာ Salmorejo ထက်ပင် သက်တမ်းပိုကြီးသည်ဟု ယုံကြည်ရသည်။
ဒါပေမယ့် Córdoba ရဲ့ ပုံမှန်အစားအစာထဲမှာ အအေးဟင်းတွေချည်းပါပဲ။ ၎င်းတွင် အရသာရှိသော ဟင်းချက်နည်းများလည်း ပါရှိပါသည်။ ၎င်းတို့အနက် ပဲခြောက် သို့မဟုတ် စွပ်ပြုတ်၊ ဘိုရိုနီးယား နှင့် တိုင်းပြည် paella. နောက်ပိုင်းတွင် ထမင်း၊ ဝက်ပေါင်ခြောက်၊ ဘေကွန်၊ ကြက်သားနှင့် chorizo ​​အပြင် paprika နှင့် လေးညှင်းပွင့်တို့ ပါဝင်ပါသည်။ အလားတူ အခြားစွပ်ပြုတ်များသည် ကညွှတ်ခါး၊ migas နှင့် ယာဂုတို့ဖြစ်သည်။
ဒါပေမယ့် ဌာနေတိုင်းရင်းသားက ပိုပါတယ်။ ကော်ဒိုဗန်အိုးpaprika၊ ဝက်သားဘေကွန်၊ ကြက်သွန်ဖြူ၊ ကြက်သွန်ဖြူ၊ ဆားနှင့် ဂေါ်ဖီထုပ်တို့ဖြင့် ပြုလုပ်ထားသော ကုလားပဲစွပ်ပြုတ်။ ၎င်းသည် အားကောင်းသော ဟင်းချက်နည်းတစ်ခုအနေဖြင့် နေ့စားအလုပ်သမားများကို ကျွေးမွေးရန် ပြင်ဆင်ထားသော်လည်း အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ ၎င်းသည် Andalusian ပြည်နယ်၏ အစားအသောက်ဆိုင်ရာ ဂန္တဝင်ဖြစ်လာခဲ့သည်။
Rabo de toro၊ ကော်ဒိုဘာ၏ ဂန္တဝင်အစားအစာတစ်ခု
အထူးသဖြင့် Córdoba တောင်များတွင် ကျွဲနွားများကို မွေးမြူကြသည်။ တကယ်တော့၊ ၎င်းတွင် Andalusia တွင်အကြီးဆုံးအိမ်များထဲမှတစ်ခုသည်နွားများ၊ သိုးများနှင့်ဆိတ်မျိုးစိတ်များဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည်။ ထို့ကြောင့် အသားသည် ဧရိယာ၏စွပ်ပြုတ်တွင် အဓိကပါဝင်ပစ္စည်းများထဲမှ အခြားပါဝင်ပစ္စည်းများဖြစ်သည်ကို သင်အံ့သြမည်မဟုတ်ပါ။
၎င်းတို့နှင့်ပတ်သက်ပြီး Córdoba ၏ ပုံမှန်အစားအစာအဖြစ် ဖန်တီးထားသော ဟင်းနှစ်မျိုးရှိသည်။ အကြောင်းဖြစ်သည် flamenquines နှင့် ရေခွံ. ပထမပိုင်းတွေမှာလည်း အလွန်ရိုးရှင်းတဲ့ ပြင်ဆင်မှုတစ်ခုရှိပါတယ်။ ဤရွေ့ကားများမှာ Serrano ဝက်ပေါင်ခြောက်အချပ်များကို ခါးပတ်တွင် လှိမ့်ထားပြီး၊ နောက်ပိုင်းတွင် မုန့်ဖုတ်၊ ကြော်သည်။ သိချင်စိတ်တစ်ခုအနေဖြင့်၊ နာမည်သည် ယုံကြည်ထားသည့်အတိုင်း ၎င်း၏အသွင်အပြင်မှ ဆင်းသက်လာကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့ပြောပြပါမည်။ အလားတူပင်၊ အစာအိမ်ဗေဒဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူများသည် Cordoban မြို့၌ဤဟင်း၏ဇာစ်မြစ်ကိုသတ်မှတ်ထားသည်။ Bujalanceစပိန်တစ်ခွင်ပျံ့နှံ့သွားပေမယ့်၊
နွားမြီးသည် ကျွန်ုပ်တို့နိုင်ငံ၏ အခြားဒေသများတွင် စားသုံးလေ့ရှိသော ဟင်းတစ်မျိုးလည်းဖြစ်သည်။ လက်ရှိပြင်ဆင်မှုသည် XNUMX ရာစုမှစတင်ခဲ့သော်လည်း ရောမခေတ်ကတည်းက ဟင်းချက်နည်းကို ၎င်း၏ကိစ္စတွင် လူသိများသည်။ ၎င်း၏အမည်တွင်အကြံပြုထားသည့်အတိုင်း၎င်းကိုနွားမြီး (နွားသို့မဟုတ်နွား) ဖြင့်ပြင်ဆင်ထားပြီးခရမ်းချဉ်သီး၊ ကြက်သွန်၊ မုန်လာဥနီ၊ ငရုတ်ကောင်း၊ ကြက်သွန်ဖြူ၊ ဆားနှင့်ပင်လယ်အော်အရွက်တို့ပါရှိသည်။ သံလွင်ဆီ နှင့် ဝိုင်နီ တစ်ခွက်ကို ထည့်ပါ။
ငါတို့မင်းကိုရှင်းပြထားတဲ့ ဒီဟင်းပွဲနှစ်ခုဟာ အသားနဲ့ပတ်သက်ရင် Córdoba ရဲ့ ထုံးစံအရှိဆုံး အစားအစာတွေပါပဲ။ ဒါပေမယ့် တခြားသူတွေလည်း ရှိတယ်။ artichokes နှင့်အတူအမဲသားအဆိုပါ ယုန်စွပ်ပြုတ်, အ သိုးသငယ်စွပ်ပြုတ် သို့မဟုတ် ကလေးနို့စို့ဝက်. chanfaina ကို သိုးသငယ်နှင့် ၎င်း၏သွေး၊ ကြက်သွန်ဖြူ၊ ကြက်သွန်ဖြူ၊ ကရဝေးရွက်နှင့် ငရုတ်ကောင်းတို့ဖြင့် ပြုလုပ်ထားသောကြောင့်လည်း တန်ဖိုးထားကြသည်။ ဒါပေမယ့် ဒီဟင်းချက်နည်းက တခြားသူတွေနဲ့လည်း ကွဲပြားပါတယ်။ စပိန်မီးဖိုချောင် လက်တင်အမေရိကတောင်။
Córdoba ၏ ပုံမှန်အစားအစာများတွင် တွေ့ရသည့် အခြားဟင်းလျာများ
Baena မှ အလုအယက်
အထက်ဖော်ပြပါ အရသာရှိသော ပြင်ဆင်မှုများနှင့်အတူ Cordovan ဟင်းလျာတွင် အခြားအညီအမျှ အရသာရှိသော ချက်ပြုတ်နည်းများလည်း ရှိသေးသည်။ ဥပမာ၊ မင်းမှာရှိတယ်။ San Jose omeletteဖောက်ထားသောကြက်ဥများကို ပေါင်မုန့်အတုံးများနှင့် ရောစပ်ပြီး ထူးခြားသောအဝါရောင်ရှိသော ရွှေဝါရောင်ဆော့စ်ကို ပေါင်းစပ်ထားသည်။ အလားတူပဲ Baena ကိုလည်း နူးညံ့တဲ့ ကြက်သွန်ဖြူအပေါက်များနဲ့ မွှေပါ။
လက်ရာမြောက်သည်။ ကော်ဒိုဗန်သုပ်ရုရှနှင့် ဆင်တူသော်လည်း အနက်ရောင် သံလွင်သီးဖြင့် ပေါက်သည်။ ပြီးတော့ ဟင်းသီး ဟင်းရွက် တွေ အတွက် လည်း သင့် မှာ ရှိ ပါ တယ်။ ပျားရည်နှင့်အတူခရမ်းချဉ်သီးကြော် နှင့် မွန်တီလာနာစတိုင် artichokesMontilla-Moriles အခေါ်အဝေါ်မှ စပျစ်ရည်ဖြင့် ပြင်ဆင်ထားသောကြောင့် ယင်း၏အမည်ဖြစ်သည်။
ပိုပြီးစပ်စုသည် ကြက်သွန်ဖြူဆလတ်ကြက်သွန်ဖြူကြော်၊ paprika၊ ဆား၊ ရှာလကာရည် နှင့် Serrano ဝက်ပေါင်ခြောက်များဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည့် အသီးအရွက်ကို ငံပြာရည်ဖြင့် ၀တ်ဆင်ခြင်းဖြင့် Cordovan heart ဟုခေါ်သည်။
Cordovan gastronomy ၏ ဂန္တဝင် ခရုများ
Córdoba ၏ ပုံမှန်အစားအစာတွင် အခြေခံဟင်းခရုများ
စပိန်မှာ ခရုတွေ ဘာဖြစ်သွားလဲ သိချင်တယ်။ အချို့နေရာများတွင် စားသုံးရန် ခဲယဉ်းသော်လည်း အချို့နေရာများတွင် စားဖွယ်သောက်ဖွယ်အဖြစ် ယူဆကြသည်။ ၎င်းတို့အနက်မှ Córdoba သည် ၎င်းတို့အား အရာအားလုံးအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲပေးခဲ့သည်။ ၎င်း၏ အစာအိမ်ဆိုင်ရာ နဖူးစည်းပုံလမ်းဘေးဆိုင်တွေမှာတောင် ရောင်းစားနေကြရတယ်။
တကယ်တော့ Andalusian မြို့ မှာ အသေးစိပ် တီထွင် ထားတာ တွေ အများကြီး ရှိပါတယ် ။ ငံပြာရည်မျိုးစုံဖြင့် ၎င်းတို့ကို စမ်းသုံးနိုင်သည်။ သို့သော်၊ ၎င်းတို့သည် ၎င်းတို့၏ပြင်ဆင်မှုတွင် ခရမ်းချဉ်သီး၊ ကြက်သွန်နီ၊ ငရုတ်ကောင်းနီ၊ ကြက်သွန်ဖြူ၊ စပျစ်ရည်၊ mint နှင့် အခြား ဟင်းခတ်အမွှေးအကြိုင်များကဲ့သို့သော ထုတ်ကုန်များ အမြဲလိုလို ပါဝင်နေပါသည်။ ထို့အပြင် အဖြစ်အများဆုံးမှာ အများအားဖြင့်ဖြစ်သည်။ အစပ်အချို့သော ထမင်းချက်သူများသည် အသစ်အဆန်း နှင့် ရဲရင့်သော ချက်ပြုတ်နည်းများကို ဖန်တီးနိုင်သော်လည်း၊ ဥပမာအားဖြင့်၊ ရောမစတိုင်ခရုများ၊ ငါးရှဉ့်နှင့်ပေါင်းထားသော၊ ဝက်ပေါင်ခြောက်ချည်များနှင့် ကာဗွန်နရာတို့ပင်။
မင်းသိတဲ့အတိုင်း ကော်ဒိုဘာမှာ မြစ်တွေရှိပေမယ့် ပင်လယ်မရှိဘူး၊ သို့သော် ၎င်းသည် ၎င်း၏ အစာအိမ်ဆိုင်ရာ ချက်ပြုတ်နည်းအချို့တွင် ငါးများ ရှိနေခြင်းမှ တားဆီးမထားပေ။ စပိန်ရဲ့ တခြားဒေသတွေမှာ ဖြစ်တဲ့အတိုင်း၊ နည်းနည်းတော့ များပါတယ်။ Rin-ranအာလူး နှင့် ငရုတ်ကောင်း တို့ပါရှိသော တူနာငါးစွပ်ပြုတ်။ တခါတရံ ဆားနယ်ထားသော ကော့ဒ်နှင့်လည်း ပြင်ဆင်သည်။ ဟင်းချက်ရာတွင်လည်း သုံးသည်။ စွပ်ပြုတ်ကြက်သွန်ဖြူခရမ်းချဉ်သီးနဲ့တွဲဖက်ပါတယ်။
သို့သော် ပို၍ အဖြစ်များသည်။ marinated ငါးအထူးသဖြင့် Córdoba တွင် "japuta" ၏ထူးခြားသောအမည်ပေးထားသော palometa ဖြစ်သည်။ ချိုသော paprika၊ ကြက်သွန်ဖြူ၊ ရှာလကာရည်၊ oregano နှင့် ဂျုံမှုန့်တို့ဖြင့် ရောနယ်ပြီး သံလွင်ဆီ ကြွယ်ဝစွာ ကြော်ပါ။ ဒါပေမယ့်လည်း ဒီဟင်းလျာတွေကို ၀တ်ဆင်ဖို့အတွက် marinade နဲ့ vinaigrette ကို အသုံးပြုကြပါတယ်။ နောက်ပိုင်းကျတော့ အများကြီး စားသုံးတယ်။ ကျောက်ခေတ်.
အချိုပွဲများအတွက်၊ ၎င်းတို့သည် ဤ Andalusian ပြည်နယ်၏ အစာအိမ်ဆိုင်ရာတွင်လည်း ကွဲပြားပါသည်။ ဒိန်ခဲကောင်းကောင်းတွေ ရှိတယ်၊ PedrochesExtremadura နှင့် နယ်နိမိတ်ချင်းထိစပ်နေသော တူညီသောချိုင့်ဝှမ်းတွင် ပြုလုပ်ထားသည့်၊ သို့သော်၊ အားလုံးထက်၊ ကော်ဒိုဘာ၏ပုံမှန်အစားအစာများတွင်မုန့်များအလွန်အရေးကြီးသည်။
Cordovan ဟင်းလျာ၏ချိုမြိန်မှုသည် ပုံမှန် Andalusian ဒြပ်စင်များကို La Mancha အမြစ်၏အခြားသူများနှင့် ပေါင်းစပ်ထားသည်။ ဥပမာ ဒယ်အိုးကြော် အစရှိတဲ့ အသီးအနှံတွေကို ပိုင်ပါတယ်။ ပန်းပွင့်များCampo de Calatrava မှ မူလဖြစ်ပြီး မက္ကဆီကိုနှင့် ကိုလံဘီယာတို့ကိုပင် ရောက်ရှိခဲ့သည်။ အဲဒီအစား၊ သူတို့က ပိုပြည်တွင်းဖြစ်ကြတယ်။ Aguilar meringuesအဆိုပါ Priego မှ ဒိုးနပ်များ နှင့် Puente Genil မှ quince ငါးပိ.
မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ Cordoban မုန့်များ၏ပါဝင်ပစ္စည်းများမှာ ပျားရည်၊ နှမ်းနှင့် matalahúva တို့ဖြစ်သည်။ သို့သော် Andalusian ပြည်နယ်၏ပုံမှန်အချိုပွဲများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ Cordovan ကိတ်မုန့်နတ်သမီးဆံပင်နှင့် မုန့်ဖုတ်မုန့်တို့မှ ပြုလုပ်ထားသော အရသာတစ်မျိုး။ ၎င်း၏တစ်ဦးချင်းစီဗားရှင်းတွင်၎င်းသည်အမည်ကိုလက်ခံရရှိသည်။ လက်အိပ် နှင့် တူညီသော padding ကိုဆောင်ထားပါ။ shortcrust pastry ကိတ်မုန့်.
နောက်ဆုံးအနေနဲ့၊ သင်သည် အခြားသော Cordovan အရသာကို ခံစားလိုပါက အချို့ကို မှာကြားနိုင်ပါသည်။ ဂျုံယာဂုမွှေး. ဤကိစ္စတွင်၊ ၎င်းတို့ကို ဂျုံမှုန့်၊ သကြား၊ နို့၊ စမုန်ဖြူ၊ သံပုရာ၊ သံလွင်ဆီနှင့် သစ်ကြံပိုးခေါက်တို့ဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည်။
Montilla-Moriles မှ ဝိုင်
အချိုရည်တွေအကြောင်း မပြောဘဲ Cordovan gastronomy ရဲ့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ခရီးစဉ်ကို မပြီးနိုင်ပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့ အရင်တုန်းက ပြောခဲ့ပြီးသားပါ။ Montilla-Moriles ၏ စပျစ်ရည်၏ မူလ ဂိုဏ်းခွဲ. ၎င်းတွင် အလွန်ကောင်းမွန်သောဝိုင်များကို သင်တွေ့လိမ့်မည်။
အကယ်၍ သင်သည် ဖီနိုတစ်ခွက်ကို အခြား dulce (ဥပမာ၊ Pedro Ximénez) နှင့် ပေါင်းစပ်ပါက၊ ငါးဆယ့်ငါးဆယ်အချိုရည်အဖြစ် မြို့တွင်းတွင် တွင်ကျယ်စွာ စားသုံးကြသည်။ ပြီးတော့ ဟင်းကောင်းကောင်းချက်ဖို့ တစ်ခွက်ကို မှာလို့ရပါတယ်။ မိုက်ရိုင်း ဘရန်ဒီစမုန်နက်ဖြင့် ပြုလုပ်ထားသောကြောင့် ကမ္ဘာကျော်သည်။
နိဂုံးချုပ်အနေနဲ့ကတော့ ဟင်းပွဲတွေရဲ့ ပါဝင်ပစ္စည်းတွေနဲ့ ရိုးရာဟင်းလျာတွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ Cordoba ၏ပုံမှန်အစားအစာ. သို့သော်၊ ထိုကဲ့သို့သောအခြားအံ့သြဖွယ်များကိုဖော်ပြရန်ကျွန်ုပ်တို့ပျက်ကွက်မည်မဟုတ်ပါ။ Pedroches ချိုင့်ဝှမ်းမှ Serrano ဝက်ပေါင်ခြောက်အဆိုပါ Pozoblanco ဝက်အူချောင်း, Las Fuentoeovejuna မှ အမည်းရောင်ပူတင်း သို့မဟုတ် သက်သတ်လွတ်လယ်ကွင်းတွင်၊ ကော်ဒိုဗန် ဟက်ရှ်သခွားသီး၊ ကြက်သွန်နီ၊ ငရုတ်ကောင်း၊ ခရမ်းချဉ်သီး၊ သံလွင်ဆီ၊ ဆားနှင့် ရှာလကာရည်တို့သာ ပါရှိသည်။ လှပတဲ့အလှကို လာလည်တယ်လို့ မခံစားရဘူးလား Cordoba နှင့်ဤအစာအိမ်နဲ့မွေ့လျော်ပျော်မွေ့။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ခရီးသွားသတင်း » စပိန်မြို့ကြီးများ » Cordoba » Cordoba ၏ပုံမှန်အစားအစာ